UMashaba ukhathazekile ngeWorld Cup ka-2018 | News24
UMashaba ukhathazekile ngeWorld Cup ka-2018
ISITHOMBE: gallo images Umqeqeshi weBafana Bafana uShakes Mashaba ubingelela izihlwele ezabe zithamele umngcwabo kakaputeni weBafana Bafana ne-Orlando Pirates eMoses Mabhida eThekwini lulunye kuLwezi. Lo mdlali washonela eVosLoorus eGauteng em
UMQEQESHI weBafana Bafana u-Ephraim “Shakes” Mashaba akasakwazi ukulala ngokuthula kulezi nsuku. Phela ulala ephenduka futhi ezibuza ukuthi kaze uzokwazi yini ukuya kwi-2018 World Cup.
Phela kuzokhumbuleka ukuthi lo mqhudelwano webhola lomhlaba uzobe ubanjelwa eRussia ngo-2018.
Iqembu laseMzansi, iBafana Bafana izohambela e-Ombaka National Stadium eseBenguela ukudlala ne-Angola kusasa ngoLwesihlanu ngo-4.30pm, ngokwesikhathi salapha eNingizimu Afrika.
Lo mdlalo ubaluleke ngendlela eyisimanga kanti noMashaba wazi kahle ukuthi uma behlulekile ukuwina, indlela eya eRussia iyogcina iyiphupho futhi naye alahlekelwe wumsebenzi.
Phela inhlangano ephethe ibhola kuleli iSouth African Football Association (Safa) yakubeka kwacaca noma kwaba umbandela emsebenzini kaMashaba uthi aqiniseke ukuthi iBafana Bafana iyaya eRussia.
Phela okunye okubuhlungu ukuthi uma uMzansi uhlulekile ukuya eRussia ngo-2018 enye iWorld Cup isiyoba ngo-2022 eQatar. Lo mdlalo iBafana Bafana ezowudlala ne-Angola kusasa izoba umlenze wokuqala kanti owesibili uyoba seMoses Mabhida Stadium ngoNovember 17.
Noma iBafana Bafana yakwazi ukudla i-Angola ngenyanga edlule ngo 2-1 kwimidlalo yeChan nalapho uMzansi wagcina ngokuhluleka ukuphasa ukuze idlale kulo mqhudelwano, uMashaba uyazi ukuthi kulokhu umqeqeshi we-Angola uRomeo Filemon uzolanda zonke izingwazi zakhe ezidlalela amaqembu amakhulu aphesheya.
“Ngiyazi ukuthi iqembu lase-Angola lizobe lihlukile kunaleli esalidla kwiChan. Ngiyazi futhi ukuthi uFilemon uzobiza bonke abadlali bakhe abayizingwazi futhi abadlalela amathimu aphesheya. Kuzoba nzima impela kodwa-ke nathi sizoya njengamadoda silwele ukunqoba.
“Phela kusobala ukuthi amathuba okudlala ku-2018 Russia World Cup ancike kule midlalo ne-Angola,” kusho uMashaba.
Ukutshengisa ukuthi uMashaba akafuni ukuthatha amashansi noma ukugembula ngalo mdlalo, ubize zonke izihlabani zakhe ezake zamshayela umsebenzi zachaza nabaningi ngaphambilini. Izikhokho ezifana no-Andile Jali, Mandla Masango kanye noThulani Serero bakhona eqenjini likaMashaba. Selilonke iqembu leBafana Bafana limi kanje: